Dowlada Soomaliya oo C/laahi Sambaloolshe oo ka soo Jeedo Gobalka Hiiraan u magacowdey Safiirka Somalia ee dalka Ingiriiska – idalenews.com
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horeysey safiir u magacaabey mid ka mid ah dalalka dunida ugu tunka waaweyn, iyadoo magacaabistanina ay noqoneysa markii ugu horeysay ay dowlada Soomaaliya ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u magacowdo Safiir tan iyo markii dowladda Mareykanka siisey aqoonsi dowlada Soomaaliya.
Kulankii ay manta Golaha Wasiirada ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegey in Cabdullaahi Max’ed Cali Sambaloolshe loo magacaabey Safiirka Rasmiga ee Dalka Soomaaliya uga wakiilka ah Dalka Ingiriiska.
Sambaloolshe ayaa horey u soo noqdey wasiirka amniga gudaha ee Xukuumada Cumar C/rashiid Cali Sharmaake isagaa xiligaas lagu bedeley marxuun Col Cumar Xaashi Aadan oo ku geeriyoodey qarax lagula eegtey xarunta gobalka Hiiraan ee Beledweyne.
Sambaloolshe oo siyaasad ku soo biirey xili dhow, ayaa waxaa horey uu uga mid ahaa mid ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee ka shaqeeeya gudaha Soomaaliya isagoo si gaar ah ula shaqeyn jirey hay’ad lagu magacaabo UNOCHA oo hoostagta qaramada Midoobey.
Magacaabista C/laahi Sambaloolshe ayaa imaaneysa iyadoo dhowaan dalka Ingiriiska uu ka dhici doono shirweyne dowlada Ingiriiska ay u qabaneyso dhinacyada Soomaaliya kuwaasoo xal waara la rabo in looga gaaro xaalka murugeysan ee Soomaaliya iyo sidii taageero loola garab istaagi lahaa dowladda Soomaaliyeed ee Madaxweyne Xasan Sheekh.
Diblomaasigaan cusub oo ka soo jeedo gobalka Hiiraan ayaa noqonaaya siyaasigii labaad oo ka soo jeeda isla gobalka Hiiraan ee qabta mid ka mid ah safaaradaha muhiimka ah ee reer galbaeedka, iyadoo Safiirka hadda Qaramada Midoobey u jooga Soomaaliya Dr. Cilmi Ducaale uu ka soo jeedo isla gobalka Hiiraan.